कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: विदेशमा विभिन्न पेसामा कार्यरत कीर्तिपुररियनहरुको कोभिड–१९को अनुभव –६
विदेशमा विभिन्न पेसामा कार्यरत कीर्तिपुररियनहरुको कोभिड–१९को अनुभव –६
प्रस्तोता ः नारायण महर्जन, नयाँबजार, कीर्तिपुर
पुनश्चः अघिल्ला अंकमा प्रकाशित महानुभावहरु र यो अंकमा प्रकाशित महानुभावहरु साथै पछिल्लो अंकमा प्रकाशित हुने महानुभावहरु नयाँबजार क्लबबाट संचालित कीर्तिपुर एम्वुलेन्सलाई निरन्तरता दिन नयाँ सवारी साधन व्यवस्थापनको क्रममा सहयोग गर्ने सहयोगी तथा शुभचिन्तकहरु हुनुहुन्छ । सहयोगी, शुभचिन्तक र कीर्तिपुरीयनको नाताले विश्वभर Covid-19 ले मानिसहरुको जनजीवन थिलथिलो पारेको अवस्थामा उहाँहरुबाट आफु बसाईसरेको ठाउँको स्थिति जानकारी राख्ने तथा उहाँहरुको अनुभव, अवस्था र उहाँहरुको छोटो परिचय समेत समावेश गरी लेखी पठाउनु भएको पत्र र उहाँहरुसंग भएको भलाकुसारीको विषयवस्तुको मूलभाव कायम रहने गरीे यो आलेख तयार पारीएको हो ।
कीर्तिपुरबाट सन् २०१५ मा South Korea जानुभएकी सोनी महर्जनको भोगाइः
कीर्तिपुर न. पा.– ९, नयाँबजार, कीर्तिपुरमा जन्मेकी श्रीमती डा. सोनी महर्जन(थापा), हाल South Korea को Gangwo-do division को Chuncheon सहरमा परिवार सहित बसीरहनु भएकी छिन् । २०६४ सालमा स्नाकोत्तर तथा विद्यावारीधि M.Sc & Ph.D सहितको छात्रवृतिमा छनौट भएर २०७० सालमा दक्षिण कोरिया जानु भएकी र स्नाकोत्तर तथा विद्यावारीधि पुरा गर्नुभई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने विचारले फर्कनु भएकी महर्जनजीले नेपालमा २ वर्ष NIST College, Khusibun र Khwopa College, Kamal Binayak, Bhaktapur मा आंशिक शिक्षकको रुपमा अध्यापन गर्नुुभयो । नेपालमा research को काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएपछि पुनः २०७२ सालमा द. कोरिया जानु भई अहिले Hallym University को Centre for Medical Science Research College of Medicine, Hallym मा Research Professor को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
दक्षिण कोरियाले विश्वमा नै उत्कृष्ट ढङ्गबाट बिना Lockdown यो Covid-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ । दक्षिण कोरिया कुनै समयमा चीन बाहेक सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या भएको राष्ट्र थियो । तर विगतको अन्य Corona Virus को अनुभवले भयावह स्थिति आउनुअघि नै पूर्व तयारी गरेर यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । यो महामारी चीनमा देखिने बित्तिकै यहाँको सरकारले विभिन्न कम्पनीहरुलाई युद्धस्तरमा Covid जाँच्ने सामग्री बनाउन आदेश दियो । तसर्थ देशको सबै भागमा Corona Virus फैलिनु अघि नै त्यहाँ Covid जाँच्ने सामग्रीहरू प्रशस्त पुगिसकेका थिए । दक्षिण कोरियाले अपनाएको मुख्य Formula भनेको धेरै भन्दा धेरै Test र Contracttracing तथा Isolation हो । संक्रमित व्यक्ति भेट्नेबित्तिकै त्यो मानिस विगतमा कुन कुन समयमा कुन कुन ठाउँमा गएको थियो भन्ने सूचना एसएमएस मार्फत सम्पुर्ण नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराइयो र कसैलाई आफू त्यो ठाउँमा त्यस समयमा गएको शंका लागेमा तुरुन्त टेस्ट गर्नलाई आव्हान गरियो । यसका लागि चौबीसै घण्टा टेलिफोन मार्फत Hotline को व्यवस्था गरियो तथा टेस्ट र संक्रमित भेटिएमा सम्पूर्ण उपचार सरकारले निशुल्क गरिदिने हुँदा मानिसहरु सबैले आफूलाई जँचाउन झन्झट मानेनन् । त्यस्तैगरी टेस्ट पनि सबै क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध
थियो । सुरुकै दिनहरूमा प्रत्येक दिन ३ लाख सम्म टेस्ट गर्दथ्यो । त्यस्तै संक्रमित व्यक्तिले Isolation मा नबसी बाहिर निस्किएमा कडा सजाँय र जरिवाना गर्ने कानुन पनि पास ग¥यो । पश्चिमेली राष्ट्र भन्दा भिन्न कुरा भन्नु पर्दा यहाँ प्रत्येक दिन सुरुदेखि नै सबै मानिसहरूलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न हरेक दिन SMS आउने गर्दछ । यहाँका जनताहरु पनि सरकारको कुरा मान्दछन् र प्राय सबैले मास्क लगाउँछन्। हामी बस्ने अञ्चलमा अहिलेसम्म ५७ जना संक्रमित मानिस भेटिएका छन् तीमध्ये म बस्ने शहरमा सातजना भेटिए तर ती सबै अहिले पूर्ण निको भइसकें । यहाँ सबै कार्यालय तथा बजार र रेस्टुरेन्टहरू नियमित रूपमा खुला छन् । हामी दुबै नियमित कार्यालय जान्छौ र सबै काम नियमित चलिराखेको छ । त्यसैले Covid महामारीले दिनचर्यामा खासै नराम्रो प्रभाव पारेको छैन ।
म आफु पनि भाइरस (Virus) मा अनुसन्धान गरिराखेकी भएर कीर्तिपुरबासीलाई नडराउनुस् तर सजग हुनुहोस भन्न चाहन्छु । बाहिर गएर आएपछि साबुनले राम्ररी हात धुनुहोस् । बाहिर निस्किँदा सामाजिक (भौतिक) दुरी कायम गर्नुहोस् । अर्को बिर्सनै नहुने कुरा मानवीय समवेदना नभुल्नुस् । मान्छे बाटोमा हिँड्दैंमा यो रोग सर्ने हैन । बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउन प्रोत्साहन गर्नुहोस । कसैलाई रोग लागे पनि नआत्तिनुहोस । यो आफै ठीक हुने रोग हो । संक्रमित व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार नगरौं । बरु सामाजिक (भौतिक) दुरी कायम गरी सहयोग गरांै । यसो गर्दा मानिसहरु रोग लुकाउन चाहँदैनन् र अरूलाई सर्ने सम्भावना पनि घट्छ । अन्तमा उच्च मनोबल सहित हामी सबै एकजुट भई अनुशासित जीवनशैली अपनाएमा यो रोगलाई परास्त गर्न सक्छौ ।
कीर्तिपुरबाट सन् २०१० मा Denmark जानुभएका राजमान महर्जनको भोगाइः
कीर्तिपुर न. पा. ९–भाजंगाल, कीर्तिपुर निवासी राजमान महर्जन, विदेश प्रस्थान गर्नु अघि नेपालमा UMND District Training officer, Care Nepal International Development Officer Worec Nepal, AVSC int'l मा Traning coordinator रुपमा बिभिन्न INGO कार्य गर्नु भएको थियो । हाल परिवार सहित Denmark मा हुनुहुन्छ । उहाँ आफुलाई Copenhegon स्थित SDU University को Student भन्न रुचाउनु हुन्छ।
कोरोना भाइरस जोकी आज भन्दा १८ बर्ष अगाडि SARS अनि ८ बर्ष अगाडि MERS को नामबाट विश्वको बिभिन्न ठाउँहरूमा मानव बिनाशको कारकको रुपमा देखापरेका थियो । कोरोना भाइरस जुन चीनको वुहानमा देखियो यो पहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा अलि फरक देखियो जुन कोभिड १९ को नामले जानियो । युरोपका प्राय सबैजसो मुलुकहरुमा कोभिड –१९ को माहामारी फैलियो । डेनमार्क पनि यस्को प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन । हुनत डेनमार्कमा कोभिड–१९को प्रभाब अन्य युरोपेली मुलुकहरुको तुलनामा निकै कम मात्र परेको देखियो । दुई महिना स्कुल बन्द भयो । तिनिहरुको पढाई online बाट हुने ब्यबस्था गरियो, ससाना शिशु स्याहार केन्द्रहरु लगभग एक महिना जति बन्द ग¥यो Official कामहरु घरबाटै गर्ने ब्यवस्था गरियो ।
Lockdown को समयमा यहाँको जनजीबन निकै तलमाथि भएको देखिन्छ । सुरुमा कोभिड–१९लाई निकै जटिल समस्याको रुपमा हेरिएको थियो तर पछिपछि यसलाई सामान्य रुपमा लिन थाल्यो । मानिसहरु घरबाट निस्किन पनि धेरै सोच्नु पर्ने अबस्था थियो, मानिसहरु घर भित्र बस्दा बस्दा वाक्क भएका थिए तर पनि घरबाट निस्किन डराउनु पर्ने अवस्था थियो । साथीभाई आफन्तहरुसंगको भेटघाट त ठप्पै नै थियो, त्यति बेला मानिसहरु बस चढ्न, रेलमा बस्न, यति सम्म कि बाटोमा हिड्नसम्म पनि डराउनु पर्ने अवस्था थियो, बस, रेल हरु खालि खालि दौडिरहेको देखिन्थ्यो । मानिसहरुलाई Shoping mall गयो उतैबाट पो रोग सर्छ कि भन्ने डर, Grocery गयो उतैबाट पो रोग सर्छ कि भन्ने डर, सारा जनजीबन अस्तब्यस्त थियो तर shoping mall, Grocery mall हरुले Custemer हरुलाई २ मिटर पर रहने ब्यवस्था मिलाएको थियो ।
अरु कुनै रोग लागेर Hospital जानु प¥यो भने Hospital बाटै पो रोग सर्छ कि भन्ने डर, उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै रोग सर्छ कि भन्ने डर । सामान्य रुघाखोकी मात्र लागे पनि कोरोना भाइरस नै भयो कि भन्ने डर ।
Grocery ले पनि सानोतिनो रोग भएसम्म घरमै बसेर उपचार गर्ने सल्लाह दिन थालेका थियो । Emergency मा मात्र Hospital लिने सल्लाह दिन थाले। Clinic हरुमा सिधै जान नपाउने ब्यवस्था थियो । ढोकामा बसेर फोन गर्ने र ५,१० मिनेटमा मात्र स्वास्थ्यकर्मी ले लिन आउने नियम बनाएको थियो । सानो बच्चाहरूलाई घरमा समय काट्न निकै गाह्रो भयो । उनीहरुलाई तहलाउन वा रेखदेख गर्न आमाबुबाहरुलाई झनै गाह्रो भयो। बच्चाहरू बाहिर गएर खेल्न रहर गर्ने, बाहिर लान नमिल्ने बेहाल थियो सबैको ।
Europe मा Lockdown को समयमा पेट्रोलको भाउ लगभग २०% को डरले घट्यो । त्यो चाहि सकारात्मक कुरा रहयो। उता Hospital मा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको ब्यथा फेरि अर्कै छ ।
उनीहरु आफ्नो काममा जान बाध्य नै थियो । उनीहरुलाई त्यो बेला अरु बेलाको तुलनामा लगभग दोब्बर काम हुन्थ्यो । यता माहामारीको डर अर्को कामको बोझ फेरि PPE पहिरनले काम गराईमा अप्ठ्यारो, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अबस्था अझ दयनीय थियो।
June2सम्म डेनमार्कमा Positives cases -11, 699 जना, Total death -576 जना, Total recovered-10,412 जना, Active cases -711, जना, Serious cases -20 जना थिए ।
डेनमार्कमा नेपाली संक्रमितको अबस्था वास्तवमै भन्न गाह्रो छ किनकि नेपाली संक्रमित व्यक्तिहरूले रोग लुकाउँछन् । सरकारले दिएका सुविधाहरूको कुरा गर्नुपर्दा सबै सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई lockdown period मा सामान्य तलब दिइएको थियो । स–साना शिशु स्याहार केन्द्रहरुमा निःशुल्क गरिएको थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई र Hygiene profession मा काम गर्नेहरुलाई २५%थप तलब दिएको थियो । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई ९०%सरकारले र १०%संस्थाले दिइएको थियो । Lockdown April 12 देखि May 14 सम्म सबै बन्द
थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरु काममा जाने बातावरण बनाउन तिनीहरुका बच्चाहरूलाई हेरचाह गरिदिने सुविधाको ब्यवस्था गर्न May 14 देखि शिशु स्याहार केन्द्रहरु खोलिएको छ । Lockdown मा बाहिर २ जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने । पछि १० अनि १०० गर्दै अहिले ५०० गरेको छ । Job centre हरु अझै बन्द छ । जुन June 8 बाट खुल्दैछ । Grocery हरु कहिले पनि बन्द गरिएन । बजार भाउहरुमा केहि फरक भएन ।
कीर्तिपुरबाट सन् २०११ मा Canada जानु भएका निराज महर्जनको भोगाइः
कीर्तिपुर नगरपालिका –१ थाम्वाहाल टोल निवासी निराज महर्जन बिदेश प्रस्थान गर्नु अघि नेपालमा Kamana Boarding School पढाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ परिवार सहित क्यानाडाको टोरन्टो सहरमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ । हाल उहाँ क्यानाडामा Bank of Nova Scotia मा Computer Technical Advisory को पदमा कायर्रत हुनुहुन्छ ।
Covid-19 विश्वभरि फैलिएपछि त्यहाँको अवस्था वा ब्यतिmगत अनुभवः
आज विश्वभरी Covid -19 ले हाहाकार मचाएको छ । यस्तै गरी क्यानाडामा पनि May 27 को दिन सम्म Total cases 87,481 र त्यसमा 6,760 जना मृत्यु भइसकेको छ र 46,072 recovered भइसकेको छ ।
मार्चको शुरूदेखि नै क्यानाडा सरकारले Covid-19 लाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ । सबै स्कूल, विश्वविद्यालयहरू बन्द छन् । सबै स्वास्थ्य सम्वन्धित संस्थाहरु र खाद्य व्यवसाय बाहेक सबै व्यवसाय बन्द छन् । भोजनालय पनि केवल होम डेलिभरी र पिकअप सेवाको लागि मात्र खुला छन् । मेरा दुबै छोरीहरू दुबै घरबाट पढाइ गरिरहेका छन् । यहाँको स्कूल संगठनले गुगल क्लास सुरू गरेको छ ता कि शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा दिन सकून् ।
मेरो काममा, Covid -19 ले केही प्रभाव पारेको छैन किनकि म घरबाट कुनै समस्या बिना नै काम गर्न सक्दछु । तर अन्य सबै व्यक्तिहरू जो घरबाट काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागी अहिलेको समय धेरै कठिन छ । यो Covid-19 को कारण धेरै व्यक्तिले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् । जसले यस समयमा धेरै जसोको रोजगार वा व्यवसाय गुमाएकालाई सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई हरेक4हप्तामा क्यानान्डियन २००० डलर प्रदान गरिएको छ । आज लगभग साढे दुई महिना भयो । हामी किरानाका लागि अनलाइन सपिंग गरिरहेका छौं । यो गाह्रो छ तर कुनै विकल्प छैन । अझै पनि छ जना भन्दा बढि मानिस जमघट को लागि अनुमति छैन, जब हामी बाहिर हिंड्छौं, अरूबाट २ मिटर दुरी टाढा रहनु पर्छ । शुरुमा हामीले सोचेका थियौं, यहाँ खानेकुराको अभाव हुनेछ तर यो सत्य भएन । यहाँ खानेकुराहरु अभाव छैन । भाइरसको कारण मर्नेहरु धेरैजसो वृद्ध र स्वास्थ्य सम्झौतामा परेका व्यक्तिहरू (दीर्घ रोगीहरु) छन् । यो सबैको लागि गाह्रो समय हो तर हामी सबैले धैर्य गर्नु आवश्यक छ र सरकारी अधिकारीहरूले जारी गरेको नियमहरू पालना गर्नु आवश्यक छ । एक अर्काबाट टाढा रहनाले धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ । आजू द्यो(बाघ भैरव)को आशीर्वादले हामी यहाँ सुरक्षित छौं र प्रार्थना गर्छौं भगवानले सबै देश बिदेशमा रहनु भएका सबै नेपालीहरुलाई धैर्य गर्ने शक्तिका साथै सुरक्षा प्रदान गरुन् । जहाँ भए पनि सुरक्षित रहनुहोस् बलियो रहनुहोस्, हामी यस परिस्थितिबाट विजयी हुनेछौं ।
मेरो विचारमा सुरक्षित रहन निम्न उपाय अपनाउदा राम्रो हुन्छ होला ।
१. आफ्नो हात साबुन र पानीले बारम्बार धुनुहोस् , फोहोर हातले आफ्नो अनुहार नछुनुहोस् ।,
२. सामाजिक (भौतिक) दूरी कायम राख्नुहोस् ।,
३. भिटामिन सी र भिटामिन डी भएको खाना नियमित रुपमा खानुहोस् ।,
४ सरकारले जारी गरेका नियमहरुको पालना गर्नुहोस्।
बिदेशमा रहीअन्य पेशामाकार्यरतअरु कीर्तिपुर बासिन्दाको अनुभव अर्को अंकमा पनि प्रकाशित गर्नेछु । (क्रमशः)
Posted by kirtipur.com.np at 6:16 AM